Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland oo safarkiisii ugu horeeyay uga baxay Puntland. – Kalfadhi
MUQDISHO, 16 JAN 2019 (KALFADHI)-Cabdixakiim Maxamed Axmed (Dhooba-daarood) Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Puntland ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waana markii ugu horeysay uu gaaro Baydhabo isagoo ah Guddoomiyaha Baarlamaanka Maamulka Puntland. Sidoo kale waa markii ugu horeysay ee uu ka baxo degaanada Puntland tan iyo markii la doortay.
Guddoomiye Cabdixakiim ayaa socdaalkiisa waxaa ku wehliya Xubno ka tirsan Baarlamaanka Puntland waxayna ka qeyb galayaan Xafladda caleema-saarka ee Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed oo maanta ka dhacaysa Baydhabo ee xarunta kumeel gaarka ah ee K/Galbeed.
Cabdixakiim Maxamed Axmed (Dhooba-daarood) oo Guddoomiye ka noqday Baarlamaanka Puntland bilaawgii bishaan ayaa sidoo kale socdaalkiisa waxaa ku wehliya Madaxweyne ku xigeenka Maamulka Puntland Axmed Cilmi Karaash.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland ayaa hadal uu warbaahinta siiyay markii uu gaaray magaalada Baydhabo waxa uu ku faah faahiyay safarkiisa iyo maalmaha uu sii joogi doono Koonfur Galbeed Soomaaliya isaga iyo wafdiga la socda. “waan ku faraxsanahay inaan maanta joogo Baydhabo, waana u mahadcelinayaa dhamaan Shacabka Koonfur Galbeed iyo madaxdooda”, ayuu yiri markii uu ka dagay Garoonka Baydhabo.
“Waxaan u imid inaa ka qeybgalo caleema saarka Madaxweyne Lafta-gareen, maalmo waan idinla joogi doonaa hadii Alle idmo”, ayuu u sheegay warbaahinta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Cabdixakiim Maxamed Axmed (Dhooba-daarood) ayaa ka mid ah masuuliyiinta gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay oo ay maanta ka dhaceyso Xafladda caleema saarka Madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen.